थरिथरिका ग्याजेट्स कभर, कन्डमदेखि बबलशिल्ड सम्मका यी कस्ता कभर ?
कुन बेला र कतिखेर कहाँ रहँदा पानी पर्दछ भन्ने कुनै जानकारी हुँदैन । अथवा कहिलेकाहिँ झक्किएर मोबाइल पानीमा झर्नसक्ने खतरा पनि हुन्छ । वर्षाको मौसममा त हामीलाई घरबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै आफ्नो स्मार्टफोन, क्यामरा, ल्यापटप, ट्याबलेट लगायतका ग्याजेट्स भिज्ने चिन्ता हुन्छ । साथै कहिलेकाहिँ झक्किएर यस्ता सामाग्री पानीमा पर्ने अर्को डर पनि हुन्छ । पानीबाट ग्याजेट्सलाई जोगाउन हामी विभिन्न उपायहरुको खोजीमा हुन्छौं । ग्याजेट्स प्रयोगकर्ताले…विस्तृत समाचार »
सेभ नभएको नम्बरबाट फोन आएपनि चिन्न सकिने एप्स्
के तपाईलाई थाहा छ, नचिनेको नम्बरबाट कल आएपनि कसले फोन गर्यौ भनेर चिन्न सकिन्छ । स्मार्टफोन बोक्नेहरुले मात्र यो सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ । Truecaller नामक मोबाइल एपले तपाईँको मोबाइल सेटमा सेभ नगरेकाहरुको समेत नाम र ठेगाना बताइदिन्छ । त्यसका लागि तपाईँले Truecaller एप डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । इन्टरनेट भएका ठाउँमा मात्र सो एपले नाम र ठेगाना स्क्रिनमा देखाउने स्वीडेनको डेभलपर संस्था ट्रु सफ्टवेयर स्क्यान…विस्तृत समाचार »
सगुन र क्यानबिच सहकार्य, सूचना प्रबिधि क्षेत्रको बिकास गर्ने
४, मंसिर काठमाडौँ । सगुन इं कर्पोरेशन र क्यान महासंघ बिचमा नेपालको सूचना प्रबिधि क्षेत्रको बिकासर बिस्तारमा सम्भायता अध्ययन गरी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । सगुन इं कर्पोरेशन र क्यान महासंघबीच सूचना प्रबिधिक्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यशाला, आदिमा सम्भाव्यता हेरेर सहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो । सूचना प्रबिधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले नेपालीहरुले शुरुगरेको सामाजिक सञ्जाल सगुनडटकमले देशको सूचना प्रबिधिक्षेत्रको…विस्तृत समाचार »
भारतले नेपालको घाँटी अठ्यायो
१, मंसिर काठमाडौँ । भारतले नेपालमाथी दुई महिनादेखि नकाबन्दी गरेर अत्याचार गरेपछि भारतले नेपालको घाँटी अठ्यायो’ भन्ने हृयासट्याग विश्वभर ट्रेण्डिङ भएको छ । “नेपाल चोक्ड बाइ इण्डिया’ भन्ने यो सन्देश विश्वभर फैलिएको छ । विश्वभरको ट्रेण्डिङमा यो आठौं नम्बरमा छ । तर, पाकिस्तानमा भने दोस्रो नम्बरमा नै ट्रेण्डिङ भइरहेको छ । ट्वीटरमा हृयासट्याग प्रयोग गर्नेहरुले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेकोमा भारतको आलोचना गरेका छन् । …विस्तृत समाचार »
३०, कात्तिक मोरङ । भारतले नाकाबन्दी गरेर देशले चरम रुपमा इन्धनको अभाव झेलिरहेका बेला मोरङका विद्यार्थीले हावाबाट चल्ने रिक्सा निर्माण गरेका छन् । हात्तीमुढास्थित मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निकका मेकानिकल समूहका पाँचौँ ब्याजका विद्यार्थीले हावाबाट चल्ने तीन चक्के रिक्साको सफल परीक्षण गरेका हुन् । नेपालमै पहिलो पटक तयार गरिएको रिक्सामा चार स्टोक पेट्रोल इन्जिनलाई मोडिफाइ गरेर हावाको चापबाट चल्ने बनाइएको हो । विद्यार्थीको तीन महिनाको मेहनतपछि…विस्तृत समाचार »
होशियार ! तपाइको फेसबुक एकाउण्ट ह्याक हुन सक्छ त्यसैले यसो गर्नुहोस्
नेपालमा फेसुबकको दुरुपयोगको विषयलाई लिएर दैनिकजसो समाचार आइरहेका छन् । प्रयोगकर्ताले पनि आधारभुत सुरक्षामा ध्यान नदिदा त्यस्तो बदमासी भइरहेको छ । फेसुबक र गुगलको प्रयोग गर्दैगर्दा पासवर्ड ह्याक नहोस् भनेर आफ्ना युजरलाई दोहोरो सुरक्षा विधी अर्थात ‘टु स्टेप भेरिफिकेशन’को सुविधा उपलब्ध गराउदै आएको छ । इन्टरनेट विशेषतः फेसबुकमा हुने गरेका गतिविधीलाई गोप्य नै राख्न दोहोरो सुरक्षा विधी प्रयोग गर्न जरुरी छ । प्रक्रियामा केही झन्झटिलो…विस्तृत समाचार »
जानिराख्नुहोस् नत्र फेसबुकले तपाईलाई सधैकालागि ब्लक गर्ला
यदि भुलवस तपाईले टिएसयु डट को नामक वेबसाइटलाई फेसबुकमा लेख्नुभयो भने फेसबुकले तपाईलाई सिधै ब्लक गर्न सक्छ । यस वेबसाइटलाई जानी जानी वा अन्जानमा फेसबुकको स्ट्याटस, कमेन्ट वा म्यासेजमा लख्योे भने फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्ने छ। टिएसयु डट को पनि फेसबुक जस्तै एक सामाजिक संजाल हो । यस वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरु यदि अन्य प्रयोगकर्ताहरुलाई आमन्त्रित गर्छन् भने यस वेबसाइटले उक्त प्रयोगकर्तालाई केही रकम प्रदान गर्छ। यदि…विस्तृत समाचार »
निगरानी तत्काल बन्द गर्न फेसबुकलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम
२५ कार्तिक २०७२
बेल्जियमको एक अदालतले फेसबुकका सदस्य नरहेका व्यक्तिमाथि गरिने निगरानी तत्काल बन्द गर्न फेसबुकलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । बेल्जियमको अदालतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोग नगर्ने वा फेसबुकसँग नजोडिएका आफ्ना नागरिकमाथि हुँदै आएको निगरानी ४८ घण्टाभित्र बन्द गर्न सोमबार राति निर्देशन दिएको हो । फेसबुले भने यो फैसला विरुद्ध अपिल गर्ने जनाएको छ । फेसबुकले गएको पाँच वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको कुकीसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले…विस्तृत समाचार »
यस्ता छन् फेसबुक चलाउन छाड्नैपर्ने कारणहरु
विश्वमा सबैभन्दा व्यापक प्रयोगमा रहेको तथा सबैभन्दा ठूलो सोसल नेटवर्किंग साइट फेसबुकका मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या डेढ अर्ब नाघिसकेको छ । एक दिनमै एक अर्ब मानिसले फेसबुक चलाउन थालेका छन् । फेसबुक हाम्रो यति नजिकको साथी बनिसकेको छ की यसमा हामीले हाम्रो जिवनका धेरै कुराहरु शेयर गर्न थालिसकेका छौँ । हाम्रा सोँच, विचार, भावना, अवस्थिति, योजना, जानकारी, सूचना तथा तथ्यांक लगायतका कुराहरु फेसबुकमा शेयर गर्ने…विस्तृत समाचार »
काबुल, कार्तिक १० । अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा आएको भूकम्पमा परी घाइते भएका र हराएका ब्यक्तिको खोजीका लागि इन्टरनेज खोज कम्पनी गुगलले नयाँ सेवा उपलब्ध गराएको छ । गुगलले भूकम्पपछि उपलब्ध गराएको वेवसाइट फाइन्डर मार्फत भूकम्पमा घाइते भएका र हराएका ब्यक्तिका बारे विवरण राखी खोजी गर्न सकिने ब्यबस्था मिलाएको छ । गुगलले नेपालमा गत बैशाख १२ गते आएको भूकम्पका बेला पनि यो सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 33 34 35 36 Older